Khabiir Kala Duwan: Khafiifin, Qaadasho, Dhibaato iyo Xumad
Waxaa jira afar nooc oo waaweyn oo ah daalacashada internetka - Internet Explorer, Google Chrome, Safari iyo Mozilla Firefox. Ma aha qalad in la yidhaahdo in isticmaalayaasha Internet Explorer ay la kulmaan dhibaatooyin kala duwan bilihii dhawaa. Qaar badan oo ka mid ah ayaa ka warbixiyay weerarrada iyo khatarta shabakadda internetka. Weli, shabakadda websaydhku waxay samatabbixinaysaa lafteeda, waxayna noqotey mid guuleysta marka loo eego kuwa kale. Shaki la'aan, dhammaan shabakadaha internetka ayaa wanaagsan inay raacaan, laakiin kuwa ku kalsoon ee leh xawaaraha sare, kalsoonida iyo amniga ayaa ah mid aan ahayn Google Chrome.
Max Bell, Maareeyaha Guusha Macaamilka ee Semef , wuxuu leeyahay Internet Explorer waxay leeyihiin qaar ka mid ah arrimaha amniga ee ugu weyn oo laga yaabo in dadka isticmaala lagu weydiiyo inay cusbooneysiiyaan goobaha dookhooda ay hal mar ama laba jeer usbuucii - high pr page backlinks. Mashiinnadoodu waa inay lahaadaan nidaamyada ugu dambeeya ee hawlgalka si baaritaanka barnaamijyada laga soo qaado fayrasyada iyo nadaafadda ayaa suurta gal ah. Google Chrome waxaa la yiraahdaa inuu yahay website-saaxiibtinimo iyo kalsooni badan marka loo eego shabakadda internetka kale. Firefox iyo Safari waxay ku jiraan ugu yaraan baahida oo ma bixiyaan natiijooyin sax ah sida Google Chrome.
Kalluumeysiga, Dareemaha, iyo Noocyada
Si loo hubiyo ilaalinta qalabkaaga sharaxaad, phishing, iyo xarfaha, waa in aad rakibsataa shabakada ugu dambeysa oo iska ilaali fariimaha aan la aqoon. Plus, waa in aanad marnaba furin lifaaqyada emaylkan oo isku day in aad aqoonsato diraha kahor intaadan furin lifaaqyada. Haddii aad u maleyneyso in dirjiruhu uu ku kalsoon yahay, waa inaad qabsataa cursorka iskuxirka si aad u aragto URL-kiisa..Haddii cinwaanku u muuqdo mid sharci ah, waxaad furi kartaa email-kaaga oo waxaad akhridaa waxa ku qoran gudaha. Waxaad iska ilaalin kartaa kaluumeysiga, qashin-qaadka, iyo waxyaabahan maskaxda lagu hayo oo aad hubin karto badbaadadaada internetka.
Haddii aad ka heshid email-ka bogagga internetka iyada oo lala xiriirinayo qaar ka mid ah isku xirnaanta iyo farriimaha, waa inaadan waligaa gujin oo furin xiriiriyeyaasha. Taa bedelkeeda, waa inaad isku daydaa inaad qiimeyso qofka yahay diraha iyo maxay ujeedada u dirto emailkaas. Haddii emailka laga helo ilo lagu kalsoonaan karo, waxaad furan kartaa oo eeg kartaa farriinta. Haddii kale, waa inaad tagtaa boggooda internetka adigoo ku dhejinaya cinwaanka shabakadda ama u adeegso buug-yare loogu talagalay ujeeddadaas.
Haddii ay dhacdo, email ayaa laga helayaa faylka spam; waa in aanad marnaba u furin sababta oo ah waxay noqon kartaa calaamad muujinaysa in emailka laga soo diray khardhad. Waxay noqon kartaa fariin phishing ah, oo kugu xiri doonta khiyaamo. Xayeysiisyo kala duwan ayaa la soo diraa, waxayna noqoneysaa mid aan macquul aheyn in dadku ay ogaadaan calaamadaha lagu kalsoon yahay. Waxaa jira fursado isku-xirnaanta bogagga isdaba-joogga ah oo ay ku jiri doonaan emailadaas
Waa inaad maskaxda ku haysaa in shirkadaha sharciga ah iyo shirkadaha sharciga ahi aysan waligood u dirin macaamiisha macaamiishooda aqoonsiyada gaarka ah. Waxay sidoo kale kaa codsadaan inaad gujiso xiriirada ayada oo aysan jirin sababo gaar ah. Haddii aad hesho email, waxaad u maleyn kartaa inay tahay mid sharci ah, laakiin maahan.
McAfee waxay bixisay barnaamijyo badan oo lacag la'aan ah, laakiin midka ugu fiican waa SiteAdvisor. Barnaamijkani wuxuu kuu ogolaanayaa inaad qeexdo khatarta fayraska iyo websaydhada laga shakiyo iyadoo midabkeedu yahay midka ku xiran xiriirka natiijooyinka raadinta. Qalabka kombiyuutarka oo aan lahayn nidaamyo hore u shaqeynaya iyo nidaamyada qadiimka ah ayaa waxay u badan tahay inay horumariyaan fayrasyada inta badan kombiyuutarada oo leh qaabab cusub oo ka mid ah nidaamyada hawlgalka